China 304 304L ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara rụpụta na ụlọ ọrụ | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 304 / 304L Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere, 304 HRC, 304L PMP
Ọkpụrụkpụ: 1.2mm - 200mm
Obosara: 600mm - 3200mm, ngwaahịa ndị ahụ dị warara dịka ịlele na ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa mmanya
304L Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
304L Chemical mpaghara ASTM A240:
C: ≤0.03, Nke: ≤0.75 Mn: 2.0, Cr:18.0～20.0, Ni: 8.0～12.0, S: .00.03, P: ≤0.045 N≤0.1
304L n'ibu onwunwe ASTM A240:
Ike ọdụdọ (Mpa):> 485
Ike Mkpụrụ (Mpa): 170
Isi ike: <HRB90
304 Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
304 Chemical mejupụtara ASTM A240:
C：.0.08 ，Na ：≤0.75 Mn ：2.0 ，Kr ：18.0～20.0 ，Ni ：8.0～10.5，　S ：.0.03 ，P ：≤0.045 N≤0.1
304 usoro ihe onwunwe ASTM A240:
304L igwe anaghị agba nchara, makwaara dị ka àjà ihe ọ ultraụ -ụ-obere carbon igwe anaghị agba nchara, bụ a vasatail igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe na ọtụtụ-eji mee ka akụrụngwa na akụkụ na-achọ ezi n'ozuzu Njirimara (corrosion na formability).
Ahụkarị Dị Iche Iche banyere 304 na 304L Hot akpọrepu na Nzuzo akpọrepu nkọwa
1.Elu nke mpempe akwụkwọ oyi na-atụ oyi nwere ogo ogo ụfọdụ. Ọ dị larịị iji metụ aka wee yie iko nchara e ji a toụ mmiri.
2.Ọ bụrụ na ekpokọtaghị mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ, ọ dị ka elu nke ọtụtụ mpempe akwụkwọ nkịtị na ahịa. Elu nke nwere nchara na-acha ọbara ọbara, elu na-enweghị nchara na-acha odo odo-ojii (iron oxide scale).
3.Arụ ọrụ bara uru nke oyi na-acha akpọrepu na mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ bụ:
(1) Ihe nkenke dị elu, na ọdịiche dị na ọkpụrụkpụ nke ígwè na-agba oyi adịghị agafe 0.01 ~ 0.03mm.
(2)Ogo ya dị ntakịrị, oyi na-atụkarị oyi nwere ike ịtụgharị ya na eriri nchara nke 0.001 mm; ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị ugbu a dị ka 0.78 mm.
(3)Ọdịdị dị elu dị elu karịa, na efere igwe a kpụkọrọ akpụkọ nwere ike ọbụna mepụta igwe enyo; mgbe elu nke efere a na-ekpo ọkụ na-enwe ntụpọ dị ka igwe oxide na pitting.
(4) Enwere ike ịkpụzi mpempe akwụkwọ oyi dịka ihe onye ọrụ chọrọ dị ka ike mgbatị na usoro nhazi dị ka njirimara stampụ.
Coldkpagharị na ịkpụgharị ọkụ bụ teknụzụ abụọ na-agagharị. Dị ka aha ahụ na-egosi, a na-emegharị ntụgharị oyi n'ihe banyere ígwè na ọnọdụ nkịtị. Ike nke ígwè a buru ibu. Hot Rolling bụ ígwè ka na elu okpomọkụ, zuru ezu:
Mpempe akwụkwọ a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere obere ike, nhazi dị mfe na ezi ductility.
Mpempe akwụkwọ mpịakọta oyi na-atụ nwere nnukwu ike ma dịtụ nhịahụ ịhazi ya, mana ọ naghị adị mfe nkwarụ ma nwee nnukwu ike.
Mpempe akwụkwọ a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere obere ike, ogo dị elu fọrọ nke nta ka ọ daa ogbenye (inwe obere ọxịdashọn na ịdị nro), mana plasticity dị mma, n'ozuzu ya na oke efere. Cold akpọrepu mpempe akwụkwọ: elu ike, elu ekweghị ekwe, elu elu imecha, n'ozuzu mkpa mpempe akwụkwọ, nwere ike iji maka zọ osisi.
Hot-akpọrepu ígwè Ibé akwụkwọ, n'ibu Njirimara ndị na-erughị ihe oyi nhazi, na abuo ibe ya bụrụ na nhazi, ma nwere mma ike na ductility.
Igwe mpempe akwụkwọ oyi na-atụ oyi nwere oke ọrụ, mgbatị siri ike, mana enwere ike ị nweta ezigbo mkpụrụ, ejiri maka iberibe mmiri na akụkụ ndị ọzọ, yana n'ihi na isi mkpụrụ dị nso na ike ike, enweghị ihe egwu n'oge eji. Amụma, ihe ọghọm nwere ike ime mgbe ibu gafere ibu kwere ekwe.
Nke gara aga: 201. igwe anaghị agba nchara efere
Osote: 309 na-ekpo ọkụ igwe anaghị agba nchara
Elu àgwà Wuxi na nkume igwe nri mbupụ sus 304 igwe anaghị ...